🥇 ▷ Nintendo Switch Diyaar u ah inay hesho Android ROM aan rasmi ahayn ✅
Nintendo Switch Diyaar u ah inay hesho Android ROM aan rasmi ahayn
Dadku in yar bay yaabanaayeen hadda sababta Nintendo Switch ma ordo Android… Waxay leedahay NVIDIA Tegra CPU, oo la tijaabiyay oo la cadeeyay inuu ku habboon yahay Android kiniinno dhowr ah iyo xitaa qalab koronto ama laba. Waxaan aragnay modders-yada oo hada waxay umuuqataa inaan qarka u saaran nahay inaan aragno ROM soo baxa.
Cod bixiyayaashu waxay horeyba u heleen Android oo ku shaqeynaya aaladda mashruucanna wuxuu socday muddo aad u dheer oo ah in aaladda Rasmiga ah ee aan rasmiga ahayn ee Android ay diyaar u tahay inay hoos u dhacdo dhowr maalmood. Aaladda ROM-ku waxay ku saleysan tahay LineageOS 15.1, oo iyaduna ku saleysan Android 8.1 Oreo. Android Pie way fiicnaan laheyd, laakiin waxaan qaadaneynaa wixii aan ku heli karno. Dabcan, waa laga yaabaa inaad ka labalabeyso inaad la tacaasho kumbuyuutarka aad ku bixisay waxoogaa yar oo ah Benyaamiin ah, laakiin devs waxay ballanqaadeysaa hab fudud oo aan xanuun lahayn.
Nintendo wuxuu ku quusanayaa dhaqankan, dammaanad-qaadida madhan, ganaaxyada ciyaaraha iyo dhammaan. Waxaa jira warbixino sheegaya ciyaartooyda adeegsada unugyada loo badalay ‘modry’ oo la mamnuucay, sidaa darteed qatarta ayaa jirta. Software-ka wuxuu ku saleysan yahay NVIDIA Shield TV, wuxuu leeyahay TWRP horey loo sii diyaariyey oo wax laga xumaado kuma filna Android sidoo kale waxay kusii wadataa la shaqeynta kontoroolka. Xitaa Joy Cons waa la taageeraa oo la shaqeeyaa, iyada oo loo marayo Bluetooth iyo habka gacanta lagu hayo.
Waxaa sidoo kale jira waxyaabo aan shaqeynaynin: hurdo qoto dheer, wareejin auto, shaashad shaashad gudaha iyo gelinta barnaamijyada qaar. Faahfaahin dheeraad ah iyo tilmaamaha rakibaadda ayaa halkan yaal. Ku sii wad halistaada!